Uphengululo lwe'Rocketet 'kunye neOfisi yeBhokisi- Ngaba iya kuba yenye yeVidiyo yeMusic eHit? - Iimuvi
Eyona Iimuvi Ngaba 'iRocketman' iya kuba yiMuvi eMusic eMdeni ukuze ibhabhe kwiOfisi yeBhokisi?
Ngaba 'iRocketman' iya kuba yiMuvi eMusic eMdeni ukuze ibhabhe kwiOfisi yeBhokisi?
UTaron Egerton kwiParamount Pictures ' Rocketman. Imifanekiso ephambili
Umxube wobunyani obuyimpumelelo kunye nobungangamsha obufaneleke kumculo obanzi, uParamount utshayela uElton John biopic, Rocketman , hits iithiyetha ngoLwesihlanu. Nangona kunjalo iingcambu zayo zibuyele emva phantse kwiminyaka eli-100.
Ngomnyaka we-1927, iHollywood yaqala ukucofa umdaniso kwindlela yayo yokuphuma kwi-Silent Era ngokukhutshwa kwe IJazz Imvumi , ithathwa njengeyona bhanyabhanya yokuqala yomculo, igqityiwe ngencoko yababini kunye ne-bevy yamanani eengoma. Ifilimu yenze utshintsho kwisiseko kulo lonke ushishino, ibeka iHollywood kunye nabaphulaphuli kwinqanaba elitsha lokungcamla, inkcubeko kwaye, okubaluleke ngakumbi, isandi. Ii-Talkies zaqala ukulawula ishedyuli yokukhululwa njengoko yonke studio yemifanekiso ephambili eshukumayo yayiphinda iphinda iqhushumbe kwinqanaba lesikrini sesilivere.
Lo mkhwa, ucocekile kwaye wandisiwe ngokuphuhliswa kwetekhnoloji yokwenza iifilimu kunye nobuchwephesha, kuqhutywa kakuhle ukuya kwiminyaka ye-1960, xa abaphumeleleyo abaLishumi abaBalaseleyo beMifanekiso yeshumi leminyaka yayingumculo. Unxibelelwano olucacileyo ludibanisa Imvumi yeJazz 'S Al Jolson ukuya Iparade yokukhanya kweenyawo 'NguJames Cagney kwaye Edolophini 'S Gene Kelly ukuba Isandi soMculo 'UJulie Andrews. Nangona kunjalo, njengoko umabonwakude uqhubeka usasazeka njengokubhabha okukhulu kwedolophu yasemaphandleni kwaye ii-1970s zangenisa ixesha le-blockbuster ene-biggies efana Imihlathi kwaye Idabi leenkwenkwezi , umculo waqala ukuphuma kwifashoni nabantu abahamba bhanyabhanya.
Kodwa njengehlelo elithile labaphangi baselwandle abavela Imidlalo yeethrone ndandithanda ukuthi, into efileyo ayinakuze ife.
I-Cineplexes ngoku ilawulwa zii-superheroes kunye ne-reboots, kodwa ifilimu yomculo ibonakala ngathi ikohambo lokubuya. Amangenelo akule minyaka ilishumi aqhubeka nokuchasana nokulindelweyo kwaye azobe izihlwele ngobuninzi. Ukulungiswa kwefilimu ngo-2012 Usizana ifumene ngaphezulu kwe- $ 440 yezigidi kwihlabathi liphela (kunye nokubulawa kwabatyunjwa baka-Oscar), ngelixa u-2014 Ehlathini ngaphezulu kokuphindaphindeka kohlahlo-lwabiwo mali lwemveliso, ngokufumana i-213 yezigidi zeedola. Emva koko sasinayo Umhlaba weLa La (eyatsala i $ 446 yezigidi), Omhle kunye nesilwanyana ($ 1.3 yezigidigidi), Oyena Mbonisi mkhulu ($ 435 yezigidi), Mamma Mia! Nako sisiya kwakhona ($ 395 yezigidi) kunye Kuzalwa inkwenkwezi ($ 434 yezigidi). Isihogo, ibohemian rhapsody (eyayifumana i-903 yezigidi ezimangalisayo) yaba yeyona nto iphambili kwi-biopic kwimbali ubukhulu becala ngenxa yeengoma zayo ezidumileyo. Okona kuninzi, ezi bhanyabhanya zonke zazisaziwa njengemidlalo ehleliyo kwaye eswelekileyo ngamanani abo omculo.
Ewe kunjalo, kukho ukungabikho: iDisney UMary Poppins ubuya Isilele ukugubha ishishini elininzi njengoko lalinethemba, kwaye wonke umntu wayelindele lukhulu ngakumbi kuClint Eastwood's Amakhwenkwe aseJersey . Kodwa xa iyonke, imovie yomculo odlalwa ngoku ibuye ibe ngumgaqo othembekileyo nongaguquguqukiyo weHollywood-obonisa kakuhle Rocketman.
Nangona ayizukuyenza ibohemian rhapsody amanani, yeyona bhanyabhanya ibalaseleyo ngazo zonke iindlela ezinokucingwa. Ilungiswe ngakumbi kwiintlungu kunye nokwenzakala kwesifundo sayo esiphambili, igxila kwiipateni awela kuzo kunye nokuzenyanya okuqhuba isimilo sakhe sokuzibhubhisa. Imiphetho emibi yobomi bakhe ayinasanti kwisibheno esikhulu. Oko kunokufaka isilingi yebhokisi yeofisi, kodwa ikwaqinisekisa imveliso elungileyo.
UMlawuli uDexter Fletcher, owanyanzelwa ukuba athathe indawo ibohemian rhapsody emva komlawuli uBryan Singer wokudubula ngequbuliso, ethatha inkululeko yoyilo ukupeyinta umfanekiso ocacileyo, wentelekelelo odibanisa inyani kunye neentsomi ezifana nephupha. Le ndlela ibalaseleyo iziko ichaphazela ubomi obuninzi obufunekayo kuhlobo lwe-biopic oluxineneyo, nokuba imovie ngokufuthi iyazenza iimpazamo zokubonisa ubuchwephesha kunye nobuchwephesha kuphuhliso lwabalinganiswa. Kuba ifilimu ihlala ixhomekeke kukhetho kwi-oeuvre kaJohn engakhange yenziwe de kube yiminyaka emva kwexesha abalibonisayo kumgca wexesha lemuvi, enye intsingiselo inokulahleka kuguqulo. Kodwa, inyani, uyakulibala konke oko xa ucula kunye ngalo mzuzu.
I-Star Taron Egerton ihambisa owona msebenzi ubalaseleyo apha, ihlanganisa yonke into ebukhali kunye ne-bravado (kunye ne-crooning prowess) umntu alindele inkwenkwezi ye-pop eyonzakeleyo ngokufihlakeleyo. Kwaye ngelixa Rocketman inokuthi ifakwe ngaphakathi kumboniso wayo, isekuqhushumbe kwamava alinganayo kwaye avusa kwaye ahamba.
Iinombolo zokulandela umkhondo ze- $ 40 yezigidigidi zomfanekiso oqingqelweyo wokukhangela ukuvulwa kwe- $ 20 yezigidi. Kuyavunywa, kuchasene nokhuphiswano oluthile oluqinileyo ngohlobo lwe Godzilla: Kumkani weZilo , Ma kwaye Aladdin , ngoku kwiveki yesibini kwiithiyetha. Kodwa ke imbali yebhokisi-yeofisi yakutshanje ibonelela ngengxelo yokugqithisa ngaphezulu kohlobo oluye lwaneemilenze ezintle ngokumangalisayo. Ukujonga ukuba uJohn uthengise ngaphezulu kwe-300 yezigidi zeerekhodi kwihlabathi liphela, sithambekele ekunikezeleni isibikezelo sesisa.
Rocketman yeyona nto izukileyo, ihlala inomdla ekubuyiseleni kwiintsuku zokuqala zeHollywood. Musa ukwenza impazamo: Ukuyibukela, uyakukhumbula xa iliwa laliselula kunye nawe ndiza kuthanda sonwabe kakhulu (uSuzie akafakiwe).
UAnderson Cooper Ufumene Ilifa Angazange Alifune
'Ukungabi nazintloni' Ukuphindaphinda 6 × 03: Masibe neNtsholongwane
Yenze, i-Emo Boy!
I-PayPal ityala imali eyi- $ 500M kwi-Uber Phambi kwe-IPO yokwandisa ubuDlelwane beNtlawulo
ingakanani ijee bezos net exabiso kuyo lulwelo
I-cbd cream yokujonga iintlungu
ukuthandana free sites 50 nangaphezulu
Iliwa likhawuleza kwaye linomsindo 9
Iziko lezorhwebo lehlabathi ngaphakathi ngaphambi kwe-9 11
I-rick kunye nexesha lokudaka 4 isiqendu 5 ukuqubha kwabantu abadala